Ny fitaovana mety dia afaka mampandeha mora kokoa ny tranokalanao ho an'ny SEO sy Manao fanamafisam-peo be dia be. Ny fitaovana toy izany dia SEO Spider Tool. Ity fandaharan'asa ity dia manampy amin'ny famerenana mijery ny tranonkala iray ary manondro ny tsy fahampiana izay nanimba ny fikarohana nataonao. Ity fampiharana bitika bitika ity dia azo alaina maimaim-poana ary napetraka ao amin'ny solosainao manokana, Linux na Mac. Hanazava sy handinika ny rohy, ny sary, ny rakitra CSS ary ny angona hafa ho an'ny tanjona SEO izany. Hanao fanaraha-maso ny blôginao na ny tranonkala koa izy io, ka hamerenany ny asa sy ny ora an-taonany satria mety handany andro marobe ny famakafakana amin'ny tanana ary mety ho sarotra ho an'ny olona izany.
1. Download sy Install:
Ny SEO Spider Tool dia misy ho an'ny Mac, Linux, Ubuntu, ary Windows ary afaka tanteraka. Na dia izany aza, ny dikan-teny maimaim-poana dia misy karazany voafetra, ary ny fividianana licence dia ahafahanao manampy URL maromaro mba hijery sy handinihana azy. Ilaina amin'ny tranonkala fototra sy avo lenta izany ary tonga lafatra ho an'ireo tsy mpandrindra. Afaka maka maimaim-poana ity maimaim-poana ity amin'ny Google Play Store na tranokala hafa mitovy amin'ny aterineto ianao ary hametraka izany.
2. Fitadiavana na manaisotra ny tranonkala:
Vantany vao nalefa sy napetraka, ny dingana manaraka dia ny hampidirina ny URL ao anaty boaty fikarohana ho an'ny tanjona mikorontana. Voalohany, tsy maintsy miditra ao amin'ny URL miaraka amin'ny code HTTP na https ianao ary tsindrio ny bokotra Start..Raha liana amin'ny fitadiavana sehatra fanampiny ianao, dia mila mametaka ny safidy Crawl All Subdomains eo amin'ny faritra Configuration> Spider. Araka ny habetsahan'ny tranonkalanao dia mety handany minitra roa minitra ny fandihizana sy ny fitrandrahana.
3. Check ny fihodinana:
Tokony hanomboka ny maso rehetra ny fihodinana ho eo, fa mety diso azy ireo raha vao nesorina araka izay azo atao mba fandaharana io manohy miasa tsy misy olana. Ny loharano lehibe dia 301 sy 302. Aorian'izany dia hahita ny fahadisoana 404 sy 505 ianao izay miseho rehefa mamangy ireo pejy izay tsy misy akory.
Miaraka amin'ny SEO Spider Tool dia azonao atao ny mamakafaka ny URL rehetra ary mamoaka ny sary na ny sary mifanaraka amin'ny fepetra takinao. Ireo zavatra rehetra ireo dia voavonjy ao amin'ny tontolon'ny URL. Ataovy azo antoka fa voamarikao ny halavan'ny adiresy amin'ny alàlan'ny fikarakarana ny tsanganana, ary tokony hijery ny sivana rehetra amin'ny ASCII ianao, sy ny fanamarihana, ny topcases, ny doka na dynamique na URL misy anao.
5. Pejy Lohateny:
Ankoatra izany, ity fitaovana ity dia hanampy anao hitsapa ny lohatenin'ny pejy. Ataovy azo antoka fa ny lohateninao rehetra dia manana ny anaram-boninahitra miavaka mba hahafahan'ity programa ity hanaparitaka ny fampahalalana ilaina ho anao raha tsy misy olana. Tokony hampidirinao koa ny teny fototra fototra ao amin'ny lohatenin'ny pejy mba hanombohana ny fanadihadihana avy hatrany ary ny fahadisoana rehetra dia alamina automatique.
Afaka mampiasa ny SEO Spider Tool ianao mba hamoronana ny Sitemaps XML. Ity karazana sitemaps ity dia ampiasain'i Google, Bing, ary Yahoo mba hikirakira votoaty mifanentana. Ny tondrozotra dia hanampy ny fitadiavana ny fitaovam-pitaterana na hamoaka ny tranokalanao tsy misy olana. Azonao atao ny manova io endri-javatra io ary manova ny faharetan'ny pejy sasany mifototra amin'ny zavatra takinao Source .